काभ्रेका दुर्गमभेगका विद्यालयको पीडा एउटा कोठामै तीन वटा कक्षा ! - Shiksha Sansar
काभ्रेका दुर्गमभेगका विद्यालयको पीडा एउटा कोठामै तीन वटा कक्षा !
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । एउटै कोठामा तीन वटा फरक फरक कक्षा सञ्चालन भन्दा तर काभ्रेका दुर्गम भेगमा प्रर्याप्त बिद्यालय भवन नहुँदा एउटै कोठामा तीन वटा कक्षा सम्म सञ्चालन हुँदै आएका छन । भूकम्पका कारण भत्किएका बिद्यालयको पुनः निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण जिल्लाका दुर्गम महाभारत र खानीखोला गाउँपालिकामा एउटै कोठामा तीन कक्षा सम्म सञ्चालन हुदैँ आएका हुन ।
विद्यालयका शिक्षक तुलबहादुर प्रधानले शिशु र कक्षा १ लाई एउटा कोठामा, २ र ३ लाई एउटा कोठामा र कक्षा ४ र ५ लाई एउटा कोठामा राखेर पढाउँदै आएको बताउनुभयो । भएका चार कोठा मध्ये एउटामा प्रशासनिक कोठा सञ्चालन छ भने बाँकी तीन कोठा कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन । शिक्षक प्रधानले आठ बर्ष देखी एउटा कोठामा दुईरदुई कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।